13 Seza Embraer Lova 650 Aircraft Aviation Interior Review Private Jet Air Charter Flight Service for raharaham-barotra na ny fiaramanidina manokana Rental Company akaiky ahy noho ny manaraka Travel toerana tamin'ny tapaky ny habeny deadhead mpanamory tongotra foana notsongaina ao amin'ny faritra misy anao.
Raha ny sata fiaramanidina tsy misy tsy fahampian'ny ny safidy. Malaza iray safidy dia ny Embraer Lova 650 fiaramanidina fiaramanidina. Izany Embraer Lova 650 fiaramanidina fiaramanidina famerenana, dia horavako ny antony mahatonga olona maro mpitantana sy ny hafa izay mitondra sata manokana io sidina mifidy fiaramanidina noho ny sidina manokana.
The Embraer Legacy 650 dia ny fisehoan'ny tsy rendrarendra sy ny fomba. Tsy misy telo samy hafa sady misy trano cabins hatramin'ny 14 mpandeha. Fiaramanidina ity no tena toerana efitra amin'ny kilasy ary ihany koa dia tonga noho ny credenza, feno fitafiana, ary ny 134 toratelo tongotra lavatory (koa ny lehibe indrindra amin'ny kilasy).
The Embraer Legacy 650 no manana ny lava indrindra ao amin'ny orinasa fiantohana amin'ny 10 taona na 10,000 sidina ora. Ankoatra, the company’s customer support team is active 24/7, ary misy ny 70 service foibe eran-tany izay efa nanolo-tena ho anao sy ny fiaramanidina. Izany no antony Embraer efa laharana #1 amin'ny mpanjifa fanohanana ny fotoana sy ny fotoana indray, ary izany ihany koa nahoana no misy amin'izao fotoana izao ny 1,200 ireo fiaramanidina eo amin'ny fanompoana amin'ny mitambatra 26 tapitrisa kilaometatra Nalefa fiaramanidina.
Low Operating Mora
Embraer Lova 650 aerospace sata manokana sidina fiaramanidina dia manana ny sasany amin'ireo ambany indrindra fandidiana vola lany eto amin'izao tontolo izao. This high utilization jet uses fuel efficient engines and the plane’s design mean it has maintenance costs that are on par with those of many two-cabin aircraft. Amin'ny isan-karazany 3,900 dranomasina kilaometatra (amin'ny mpandeha efatra) ary ny payload fahafahan'ny ny efa ho 5,000 kilao dia mora ny mahita ny antony be dia be mifidy mpitantana ity fiaramanidina manokana.
Raha toa ka mila azo itokisana sady malalaka mpandeha fiaramanidina izay mahatonga hahatsapa manokana ary mamela azy ireo hiasa aina dia ny Embraer Legacy 650 dia mafy orina safidy. Izany Mitambatra mihaja, azo itokisana sy ny ambany fandidiana mba hanome ireo mpampiasa vola lany amin'ny fiaramanidina lehibe izay miasa na mampiasa azy io ho raharaham-barotra na ny fahafinaretana.
EMBRAER Jet Lova 650 Interest rehefa mandeha ny fotoana:
Fiaramanidina EMBRAER Lova 650 Interest amin'ny subregion
Instagram: EMBRAER 750 lova 650 Jet fiaramanidina Interior
Embraer lova 650 Aircraft Aviation Luxury Atitany Private Jet Charter Flight Service #emptyleg #Jetcharter #emptylegs #wysluxury #Embraer # EmbraerLEGACY650Jetairliner # EmbraerLegacy650 # EmbraerLegacy650seating # EmbraerindustrieLegacy650 #Legacy 650Embraer #Luxuries #lifestyle #traveler
Lahatsoratra iray nozarain'i WysLuxury JetCharter (@wysluxury) amin'ny Dec 10, 2017 amin'ny 6:53PM PST